Ogaden News Agency (ONA) – Bulshooy, Googiin- Yaa Garanaya Wax Ka Quwad Sarreeya Hubka Nugleerka Ah Oo Lagu Halgamo? By- Xaaji M/rashiid.
Bulshooy, Googiin- Yaa Garanaya Wax Ka Quwad Sarreeya Hubka Nugleerka Ah Oo Lagu Halgamo? By- Xaaji M/rashiid.
Posted by Wariye Qaran	/ October 31, 2018
Akhristoow adigoo yarahe yaaban aan hordhac kooban u sameeyo qoraalkayga maanta oon kusoo qaadan doono mawduuc aan u arko inuu muhiim yahay. Bani’aadamku sidiisaba majecla in la adoonsado sababkuna waxaa weeye wuxuu dhashay isagoo xor ah. Waxaa caadi iska ah in hadii jirintaankiisa iyo karaamadiisa lasoo weeraro uu cidiyaha ku dagaalamo haduu wax kale waayo. Isla markaas uma uu baahna Culimo iyo Aqoonyahano ku wacdiya inuu is difaaco, ee waa wax damiirkiisa la fangalay oo kudhex abuuran.
Waxaa kale oo caadi iska ah, inay dadku si aad ah isugu mashquuliyaan inay yeeshaan awood dheeraad ah, ha noqdaan nidaam dawli ah ama nidaam qowmi ah kuu doonee. Markay doonayaan inay isu diyaariyaan halagan, waxay is waydiiyaan maxaan haysanaa oon awoodeena ku xoojinaa? Waxaa kale oy is waydiiyaan maxaa ciidan ah oynu haysanaa, maxaase saanad ah oynu haysanaa? Sidoo kale Maxaa dhaqaale ah oynu haysanaa? Waa su’aalaha ugu badan oy is waydiiso cid kasta oo doonaysa inay halgan guntiga u gaabsato. Halgankaasi ha noqdo mid xalaal ah ama mid xaaraam ah kuu doonee isku Qarash ayay dalbanayaan!.
Hadaan kusoo dhawaado dhuuxa qoraalka, waxaa jira hal wax oo hadii aan lahelin ayna waxbadan taraynin, Ciidanka badan, hubka culus, iyo dhaqaalaha buuran. Waxaan hayaa tusaaleyaal badan oon arinka ku cadeyn karo, balse waxaan ku kaaftoomyaa hal tusaale oo kaliya! Marka hore waxaan codsanayaa in maskaxda dib loo celiyo oo la iswaydiiyo Ururadii la dagaalamay Dawladii Marxuum Maxamed Siyaad Barre, waxay haysteen dhamaan intaan soo sheegay iyo waliba taageerada shacabkii oon waqtigaa waxba fahansaneyn. Ma jirin wax mab’da ama mustqabal ah oy haba yaaratee ku dagaalamayeen!. Cimrigoodu wuxuu ahaa dhowr sano, meesha Gobanimo,doonka ONLF uu dhowr iyo labaatan jirsaday. Si kastaba ha ahaatee, kuma faraxsani inaan maanta halkan ku xuso taariikhdii mugdiga ahayd ee umada soomaaliyeed soo martay, laakiin waa marxad jirtay oo laga soo gudbay lana dafiri karin.
Ciwaanka Qoraalku waa su’aal, waxayna u baahantahay ina laga jawaabo. Waxaan hubaa inaad maskaxda ku fooftay akhristow, si’aad u hesho jawabta! Waxaa layidhi Jinni ninkii keenaa bixiya, marka waa inaan banaanka soo dhigaa jawaabta saxda ah. Waxa ka quwad sarreaya hubka Nugleerka ah waa Mabd’a. In cidii mab’da leh aan lajabin karin waxaa daliil u ah Ururka ONLF ee gobanimo raadiya ah. Halgankoodu kuma bilaabanin ciidan badan, saanad culus iyo dhaqaale buuran toona. Waxaa si dhab ah uga dhex muuqda Geeska Afrika iyo caalamkaba jiritaanka Onlf, meesha Ururkii TPLF oo haystay dhamaan intaan soo sheegay uu Gobolka kasuulay.
Fiiro gaar ah- Mabda’a fadhigiisu waa Qalbiga, balse xubnahaa hirgaliya dalabkiisa!.
Ugu danbayn- Bulshooy ogaada mab’da isma badalo, laakiin dariiqa loo maro wuu is badali karaa. Inta mab’da jiro guushuna way jireysaa, waana saaxiib oo makala hadhaan.